ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: တွင်းထဲကရေ
ဟာ . . ဖြစ်ရလေ မောင်မျိုးရာ။
ဘာမှဖြစ်မနေနဲ့လေ။ ကိုယ်ကလည်း စိတ်ကူးကို ပုံဖော် တင်ပြတာ။ သူတို့ကလည်း စိတ်ကူးကိုပဲ ထပ်ပွား ခံစား ဆင့်ပွားသွားတာ။ ဒါကို သူကလည်း စိတ်ကူးကို တင်ပြသလို သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးပေါ်က အယူလို့ပဲ ခံယူထားရမှာလေ။ ဒီလိုပဲ ဖြစ်တော့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ် အားစိုက်ထားတာ တစ်ခုက အဲဒီလို လွဲသွားရင် ဖြစ်တတ်တယ်။
ဘာမှ ဖြစ်နေပါနဲ့လေ။ ကျောက်ခဲ အောက်ခြေ ရောက်သွားရင်တော့ ပြန်ပြီး ငြိမ်သွားမှာပါ။
အစ်မမလဲ အကြည်ဓာတ်ကုန်ဆုံးနေလို့ ပြောတတ်ဖူး။
၁၀ရက်စခန်း ၀င်လိုက်ရင် ပြန်ရ မယ်ထင်တယ်။
ကိုရွှေရတုပြောသလို အကြည်တော် ရှာဖတ်
(ဟန် မလုပ်သူ..too) :P
စိတ်လျော့ စိတ်လျော့ :)
ရေပြင်လို ကြည်လင်နေတာ တော်သေးတာပေါ့ မောင်မျိုးရ၊ မှန်တစ်ချပ်လိုများ ကြည်နေလို့ကတော့ ခဲတစ်လုံးနဲ့တင် တစ်ဘဝ ပြီးသွားမယ်၊ :)
နောက်ပါစေ...၊ ခဏလေးပါပဲ၊ နောက်တော့လည်း ရေပြင်အောက်က ရေစီးကြောင်းလို ကြည်အေး၊ ငြိမ်သက်စွာနဲ့ ပြန်ပြီး စီးဆင်းလာလိမ့်မယ်..။
ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး...။ကိုယ်ကတော့ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို ခေါင်းထဲကမရ ရအောင်ထုတ်ပလိုက်
ဖြင့် တွေးယူပြီး စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်မွေးယူရတယ်ညီရေ
ဦးကျောက်ပြောသလိုပဲ ...အကြည်တော်လို ဟာသတွေ
ဖတ်တယ်...။.လေချွန်တယ်...။စိတ်ကို မပေါ့ ပေါ့အောင်
အို.....ဒါလေးများ ကြောင်မျိုးရယ်...... ချစ်ကြည်အေးသာ သွားဖတ်လိုက်.....ဇွတ်...:P
နေ၀သန် ပြောနေကျ စကားနဲ့ပြောမည်... တရားထိုင်ပါ..၊ ဘုရားတရားလုပ်ပါ..၊ ဖြစ်ပျက်ရှုပါ... :P..
ဂျပိုးကို လိပ်ဖြစ်အောင် ရေးတဲ့အမျိုးဆိုတာ ငါ့ကို တည့်တည့်ပြောမှန်းနာတိဒယ်.
အသံကျယ်ကျယ် မတတ်လို့.. အဆိုတော် မဖြစ်တာရှင်းနေတာပဲ.
အကြည်ဓါတ် ရအောင် တရားထိုင် အာနာပါန လောက်နဲ့တင်ဖြစ်တယ်
အကြည်ဓာတ်တွေပြန်ရအောင် အိမ်မှာရှိသော မကွဲနိုင်သော ထမင်းပန်းကန်ပြား အမျိုးအစားဖြစ်ရမည်။
ထို့ကဲ့သို့သော ပန်းကန်ပြားအားတစ်နေ့ ၁၀ ခါမှ အခါနှစ်ဆယ်လောက် ကြမ်းပြင်ပေါ် လွှတ်ပစ်လိုက် ပြန်ကောက်လိုက် လုပ်ပါ။
ဂျပိုးကို လိပ်ဖြစ်အောင်ရေးသော ဘလော့ဂါ
:P :P :D :)
စာရေးတဲ့သူတွေဟာ သူရေးတဲ့စာဟာ ဖန်တီးမှုကောင်းကောင်းနဲ့ သိပ်ပီပြင်တဲ့အခါ စာထဲက ဇာတ်ကောင်က အပြင်က စာရေးသူရဲ့ တကယ့် အဖြစ်အပျက်လို့ ထင်သွားတတ်ကြတယ်..
ဥပမာ ဆရာမဂျူးဟာ သူရဲ့ အမှတ်တရ စာအုပ်ထဲက အဖြစ်အပျက်တွေဆို ဆရာမရဲ့ ကိုယ်တွေ့လို့ တော်တော်များများက ပြောကြတယ်.. ဒါဟာ ဇာတ်ကောင်ရဲ့ ဖမ်းစားနိုင်မှု ၊ အရေးအသား ယုတ္တိရှိမှု တို့ကြောင့် ဒီလိုထင်ခံရတာဘဲ။ တကယ်တမ်းက ၀တ္ထုထဲက ဇာတ်လိုက်ဟာ ကိုယ်ပါ လို့ အထင်ခံရရင် ကိုယ့်ရဲ့ ရေးဖွဲ့မှု အားကောင်းလို့၊ ကိုယ်ရေးတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့ အသက်ဝင်မှုကြောင့် လို့ ယူဆရပါတယ်.. ဒါဆို ကိုယ်က ပိုပြီးတောင် ဂုဏ်ယူရဦးမယ်။ ဘာလို့များစိတ်ပျက်နေမတုန်း။ ကိုယ်တကယ်ဟုတ်တာ မဟုတ်တာ ကိုယ့်လိပ်ပြာရော ကိုယ်ရော အသိဆုံး မဟုတ်လား။ ဘာလို့များ ကိုယ့်အကြည်ဓာတ်ကို ဆုံးရှုံးခံနေမလဲနော်။ ဒီလို အထင်ခံရတဲ့အတွက် ငါ စာရေးတာ အတော်ကောင်းလာပါလားလို့ ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ။
အကြည်ဓါတ်ဆိုတာကို နားမလည်တာတော့ ခက်ဗျာ . ကိုမောင်မျိုးမှာ စာရေးနိုင်တဲ့ စွမ်းအင်ရှိပါတယ်ဗျ .
ဒီ တွင်းထဲကရေ ဆိုတဲ့ ပို့စ်မှာတောင် ဒီနေရာလေး ကြိုက်နေသေး . <<>>>
ကိုယ်ရေးမဲ့အရာက တွေးရင်း ခိုင်လုံမှုမရှိသေးရင် ရေးဖို့အားမရှိတတ်ပါဘူးဗျာ .. ကျေနပ်နေတတ်တဲ့ စိတ်ရှိရင် ရေးဖို့လွယ်ပါတယ် .. ကိုနေဝသန်ပြောသလို တရားရှုမှတ်ပေါ့ဗျာ စိတ်ငြိမ်အောင်.. :D